Zvikumbiro kune Vanoronga Horo | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Kuti tidzivirire kupararira kwehutachiona hutsva hwecoronavirus, tinokumbira murongi kuti anzwisise uye vashande pamwe nezvinhu zvinotevera kana uchishandisa nzvimbo.
Uye zvakare, kana uchishandisa chivakwa, ndapota tarisa kunongedzo dzakagadzirwa neboka rega rega reindasitiri uye ndokumbira kunzwisisa kwako pamwe nekubatana mukudzivirira kupararira kwehutachiona hutsva hwecoronavirus.
Rondedzero yematanho ekudzivirira kupararira kwehutachiona nemaindasitiri
Pre-kugadzirisa / musangano
Murongi achava nemusangano nenzvimbo ino maererano nekuyedza kudzivirira kutapukira kwehutachiona panguva yekunyorera kuti ishandiswe panzvimbo kana panguva yemisangano yapfuura.
Mukuitisa chiitiko ichi, isu tichatora matanho ekudzivirira kupararira kwehutachiona zvinoenderana nemirawo yeindasitiri yega yega, uye kurongedza kupatsanurwa kwemabasa pakati pemurongi nenzvimbo.
Ndokumbirawo usarudze runyorwa rwekugadzirira, kudzidzira, uye kubvisa.
Ndokumbira usete nguva yekuzorora uye yekupinda / yekubuda nguva ine yakawanda nguva.
Paunenge uchibata chiitiko chisiri pasi pekugadzirwa kwe "Infection Control and Safety Plan", ndapota gadzirira uye ushambadze "Infection Control Measures Checklist" yakagadzwa neTokyo Metropolitan Emergency Measures uye Infection Spread Prevention Cooperation Fund Consultation Center. zviite.Kuti uwane kubvunza, ndapota fonera TEL: 03-5388-0567.
Nezve kugoverwa kwezvigaro zvevateereri (pekugara mwero wezvivakwa)
Semutemo wakajairika, zvigaro zvinofanirwa kuchengeterwa vatori vechikamu kuitira kuti murongi agone kugadzirisa uye kugadzirisa mamiriro ekugara.
Ndokumbirawo utore matanho akakwana ekudzivirira hutachiona, sekupfeka chifukidzo, kuparadzira kudzvanywa kwekutaura, uye kutora matanho ega ega nemurongi.
Kune zviitiko zvinotarisirwa kuve zvichipinda nenhamba yakakura yevakweguru uye vanhu vane chirwere chisingaperi, kune njodzi huru yekukwiridzirwa kana paitika hutachiona, saka ndokumbirawo utore matanho akangwarira.
* Kubata zvigaro zvepamberi: Ndokumbira utarise kunongedzo kumabhizimusi uye chengetedza chinhanho chakaringana kubva kumberi kwedanho.Ndokumbirawo ubate nzvimbo yacho kuti uwane ruzivo.
Matanho ekudzivirira hutachiona emapati ane hukama senge vanoita
Murongi nemapato ane hukama anokumbirwa kuita nhamburiko dzekudzivirira kutapukirwa zvakanyanya sezvinobvira, sekutora nguva yakakwana pakati pevatambi zvinoenderana nechimiro chekutaura.Ona indasitiri nhungamiro kuti uwane rumwe ruzivo.
Kunze kwevatambi, ndapota pfeka chifukidzo uye utachiona nemaoko ako munzvimbo iyi.
Munzvimbo umo vanhu vasingazivikanwe vanogona kubata, senge dzimba dzokupfekedza uye dzimba dzekumirira, isa mushonga unouraya utachiona wekuchenesa ruoko uye mushonga wekuuraya mishonga nguva dzose.
Kana zviri zvekudya nekunwa muhoro, zvakanaka kuva nekudya kwemasikati nezvimwewo kwenguva pfupi mushure mekumanikidza kudya chinyararire uye nekuona mhepo yekufema (haugone kudya kana kunwa muzvigaro zvehoro).
Sarudza munhu anobata zvishandiso, zvishandiso, zvishandiso, nezvimwe, uye ganhurira kugovana nevanhu vasina kutaurwa.
Uye zvakare, ndokumbira utore matanho akakwana ekudzivirira hutachiona mukudzidzira / kuita, kugadzirira / kubvisa, nezvimwe.
Kana iwe uchifungidzira hutachiona, umhan'arire kunzvimbo yacho nekukasira ugoisa wega kunzvimbo yakatarwa yekubatsira yekutanga.
Matanho ekudzivirira hutachiona evatori vechikamu
Vatori vechikamu vanokumbirwa kuyera tembiricha vasati vauya kunzvimbo, uye ndokumbirawo muziviswe zvizere pamberi pezviitiko apo ivo vanozokumbirwa kurega kuuya kunzvimbo yacho.Panguva iyoyo, ndapota tora matanho ekuona kuti vatori vechikamu havasi kukanganiswa zvakanyanya sezvinobvira uye kubvumirwa kwevanhu vane zviratidzo kunodzivirirwa.
Pamusoro pekuzviyera wega tembiricha pane chikamu chevatori vechikamu, murongi anofanirwa kutora matanho akadai sekuyera tembiricha paanopinda munzvimbo.Murongi anokumbirwa kuti agadzire tembiricha yekuyera tembiricha (isiri-yekutaurisa thermometer, thermography, nezvimwewo).Kana zvichinetsa kugadzirira, ndapota nyorera nzvimbo yacho.
Kana paine kupisa kukuru kana kuchienzaniswa neyakajairika kupisaKana uine chimwe chezvinotevera zviratidzo (*) kana zvinotevera zviratidzo, ndapota tora matanho sekumirira kumba.
Zviratidzo zvakaita sekukosora, dyspnea, yakawandisa malaise, kurwadziwa pahuro, kumhanyisa mhino / kumhanyisa kwemhino, kuravira / kusagadzikana kusagadzikana, kurwadza kwemajoini / kwemhasuru, manyoka, kurutsa.
Kana paine hukama hwepedyo neyakajeka PCR bvunzo
Zvirango zvekupinda munyika, shanyira nhoroondo kunyika / matunhu anoda nguva yekucherechedza mushure mekupinda, uye nehukama hwepedyo nemugari, nezvimwe.
* Muenzaniso wechiyero che "kana pane kupisa kwakanyanya kudarika kupisa kwemazuva ose" ... Kana pane kupisa kwe 37.5 ° C kana kupfuura
Kuti udzivise kuwanda kana uchipinda nekubuda, ndapota chengetedza chinhanho chakakwana nekupinda nekubuda uine lag yenguva, kuchengetedza ma conductor, kugovera vashandi, nezvimwe.
Iyo buffet ichavharwa kwenguva iripo.
Ndokumbira usete nguva yekubuda yakaringana uye kuraira kubuda nekwairi kwenguva yenharaunda imwe neimwe yenzvimbo.
Ndokumbirawo urege kumirira kana kushanya mushure mekuita.
Ndapota edza kubata mazita uye ruzivo rwekukurumidzira rwevatori vechikamu nekushandisa tikiti system.Pamusoro pezvo, ndapota zivisa vatori vechikamu pachine nguva kuti ruzivo rwakadai rwunogona kupihwa kumasangano eruzhinji senzvimbo dzehutano dzevanhu pazvinenge zvichidikanwa, senge panowanikwa munhu ane hutachiona kubva kuvatori vechikamu.
Ndokumbirawo kuti ushandise nesimba rekusimbisa application (COCOA) ye Ministry of Health, Labor and Welfare.
Kune vatori vechikamu vanoda kutariswa, vanhu vakaremara, vakwegura, nezvimwewo, ndokumbirawo mufunge nezvezvipikiso pamberi.
Ndokumbirawo udane kutarisisa nezvekudzivirira kwehutachiona usati uye mushure mekuita, senge kushandiswa kwakatemwa kwekufambisa uye maresitorendi.
Matanho ekudzivirira pamusoro pekupararira kwehutachiona
Murongi anofanira kukurumidza kubvunza nzvimbo iyi kana paine munhu anofungidzirwa kuti ane hutachiona uye vokurukura mhinduro yacho.
Semutemo wenguva dzose, murongi anofanirwa kuteedzera mazita uye neruzivo rwekukurumidzira rwevanhu vanobatanidzwa muchiitiko ichi nevatori vechikamu, uye chengetedza runyorwa rwakagadzirwa kwenguva yakati (inenge mwedzi mumwe).Uye zvakare, ndapota zivisa vanhu vanobatanidzwa muchiitiko ichi uye nevatori vechikamu pamberi kuti ruzivo rwakadai runogona kupihwa kumasangano eruzhinji senge nzvimbo dzehutano dzeveruzhinji pazvinodiwa.
Kubva pakuona kwekuchengetedzwa kweruzivo rwemunhu, ndokumbira utore matanho akakwana ekuchengetedza zvinyorwa nezvimwe uye nekuzvirasa nemazvo nguva yapfuura.
Ndokumbirawo muve nekuchenjerera kana muchibata ruzivo rwevanhu vane hutachiona (kusanganisira vanogara pamwe chete, nezvimwewo) izvo zvaitika, sezvo richava ruzivo rwevanhu ruzivo.
Ndokumbirawo musarudze nzira yekuzivisa kuruzhinji nekuita kana munhu ane hutachiona aitika.
Matanho ekudzivirira hutachiona muhoro
Bata hutachiona matanho ekudzivirira
Anoronga anofanira kuisa sanitizer nemaoko panzvimbo dzakakodzera senzvimbo yekupinda nekubuda kwenzvimbo uye kuitarisa nguva nenguva kuitira kuti pasashayike.
Murongi anofanirwa kugara achiuraya utachiona panzvimbo munzvimbo inowanikwa nyore neruzhinji.Murongi ndiye ane basa rekugadzirira mushonga unouraya utachiona.
Kuti udzivirire hutachiona hwehukama, ndapota funga kurerutsa tikiti panguva yekubvumidzwa.
Ndokumbirawo usape kugovera mapepa, mapepa, mapepa emibvunzo, nezvimwewo sezvinobvira.Zvakare, kana zvisingadzivisike, ive shuwa kupfeka magirovhosi.
Ndokumbirawo urege kusangana pakati pevanhu vanobatanidzwa mukuita uye nevatori vechikamu, sekushanya mushure mekuita.
Ndokumbirawo urege zvipo uye kuisa.
Ndokumbirawo muganise nzvimbo dzinogona kupinda nevatori vechikamu nemapato ane hukama (regedzai kuti vatori vechikamu vanogona kupinda munzvimbo yekupfekera, nezvimwewo).
Matanho ekudzivirira hutachiona hutete
Semutemo wenguva dzose, vatori vechikamu vanofanirwa kuve nechokwadi chekupfeka masiki kunyangwe panguva yechiitiko.
Ndokumbira utore matanho ekudzivirira kuzara panguva yekuzorora uye yekupinda / yekubuda.
Kana paine vatori vechikamu vanoita ruzha rukuru, murongi anofanirwa kutarisisa mumwe nemumwe.
Matanho ekudzivirira hutachiona pakati pemapato ane hukama (kunyanya vanoita) ⇔ vatori vechikamu
Ndokumbirawo urege kunongedza izvo zvinowedzera mukana wehutachiona (kukumbira mufaro, kusimudzira vatori vechikamu padanho, kupa vakakwira vashanu, nezvimwewo).
Ndokumbira ubvumire nzvimbo yakakwana uye upfeke masiki paunenge uchitungamira nekutungamira vatori vechikamu.
Pamataresera anosangana nevatori vechikamu (kugamuchirwa kwekukoka, macustomer tikiti-ezuva rimwe chete), nezvimwewo, ndapota chengetedza vatori vechikamu nekuisa zvikamu zvakaita semabhurugwa eacrylic uye maketeni evinyl ari pachena
Matanho ekudzivirira hutachiona pakati pevatori vechikamu
Zvinotenderwa kupfeka chifukidzo muzvigaro zvevateereri, uye ndokumbira uve nechokwadi chekuchipfeka zvakaringana nekuchiparadzira nekutengesa kune vasina kupfeka vatori vechikamu uye nekuteerera wega.
Ndokumbira utendere nguva yakakwana yekuzorora uye yekupinda / yekubuda nguva, uchifunga nezve kugona uye kugona kwenzvimbo, yekupinda / yekubuda nzira, nezvimwe.
Ndokumbirawo muvazivise kuti vanofanirwa kurega kutaura panguva yekuzorora uye pavanopinda nekubuda, uye kuvakurudzira kuti varege kukurukura vakatarisana uye vanogara kumatunhu madiki munzvimbo yekuchengetedza.
Kana huwandu hukuru hwevatori vechikamu hwakatarisirwa, ndokumbira ushandise nguva yakasara yetiketi yega yega uye nzvimbo kana uchifamba kubva pazvigaro zvevateereri panguva yekuzorora kana pakubva kudzivirira kudzikira.
Muzvimbuzi panguva yekuzorora, ndapota kurudzira kurongeka nenzvimbo yakakwana mukufunga ukuru hwenzvimbo yekutandarira.
Ndokumbirawo upedze chikafu chako usati uye mushure mekubvumirwa zvakanyanya sezvinobvira.
Pamusana pekushandiswa kwenguva refu kwechivako, zvinokwanisika kudya muimba, asi ndapota cherechedzai pfungwa dzinotevera.
Iva nechokwadi chekufema.
Gara zvisina-kumeso-nemeso nenzira.
Rega nzvimbo yakakwana pakati pevashandisi.
Dzivisa kugovana zvidimbu uye mahwendefa pakati pevashandisi.
Rega kutaura panguva yekudya.
Pfeka chifukidzo pese pazvinogoneka.
Kutengesa zvinhu, nezvimwe.
Kana pakazara, ndapota regedza kubvuma uye kurongeka pazvinenge zvichidikanwa.
Ndokumbirawo uise mushonga unouraya utachiona kana uchitengesa zvinhu.
Vashandi vane chekuita nekutengesa zvinhu vanofanirwa kupfeka magurovhosi sezvinodiwa mukuwedzera pakupfeka masiki.
Paunenge uchitengesa zvinhu, ndapota usabata kubata kwesampula zvigadzirwa kana sampu zvigadzirwa izvo vanhu vazhinji vanobata.
Funga kutengesa online kana kuita mari isina mari kudzora kubata mari zvakanyanya sezvinobvira.
Kuchenesa / kurasa marara
Ita shuwa yekupfeka mamask nemagirovhosi evashandi vanochenesa nekurasa marara.
Mushure mekupedza basa, geza uye shandisa mishonga yekuuraya utachiona maoko ako.
Ndokumbirawo mubate marara akaunganidzwa zvakakwana kuitira kuti vatori vechikamu vasasangane nawo chaiwo.
Ndokumbira utore marara akagadzirwa kumba newe. (Kubhadhara kubhadharwa kunogoneka panzvimbo).